रातिको समय भन्दा बिहानको समय सेक्स गर्नु किन मानिन्छ राम्रो ? जानौं... | Hamro Doctor News
रातिको समय भन्दा बिहानको समय सेक्स गर्नु किन मानिन्छ राम्रो ? जानौं...
यदि तपाईंसँग सोधियोस् कि सेक्स गर्ने बेस्ट समय कुन हो भने सायद तपाईंसँग यसको कुनै ठोस उत्तर नहोला । तर, हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार मर्निंग सेक्सलाई राम्रो मानिएको छ । किनकी बिहानको समय सेक्स गर्नाले मुटु स्वास्थ्य राम्रो हुनुका साथै शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि बढाउँछ । आयुर्वेदका अनुसार सेक्सको राम्रो आनन्द तबमात्र आउँछ जब दुबै पार्टनर पूर्ण रुपले रिल्याक्स हुन्छन् । उसो त सामान्यतया हेर्ने हो भने सेक्सका लागि मानिसले रातिको समयलाई चुन्ने गर्छन् । तर, मर्निंग सेक्सको फाइदाबारे जानेर तपाईंपनि बिहानको समय नै सेक्स गर्न रुचाउनुहुन्छ होला ।
युनिर्भसिटि अफ टेक्सासले गरेको एक अध्ययन अनुसार सेक्सको क्रममा अक्सिटसिन हार्माेन निस्कन्छ । जसले तपाईंको मूडलाई राम्रो बनाउने काम गर्छ । अक्सिटसिन पार्टनरसँग तपाईंको निकटता बढाउने काम पनि गर्छ । यस अवस्थामा तपाईंले पुरै दिन आफ्नो पार्टनरसँग कनेक्ट भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ।
बिहानको बोरिंग एक्सर्साइजलाई गरौं बाईबाई
यो हो बेस्ट समय
Last modified on 2019-04-28 06:26:19